Tag: billboard kushambadzira | Martech Zone
Tag: billboard kushambadzira
UZE Kufambisa: Iyo Musika Platform YeMafoni Dhijitari Kunze-kwe-kumba Kushambadzira
Chishanu, Mbudzi 27, 2020 Chishanu, Mbudzi 27, 2020 Douglas Karr
Munguva yedenda, musika wekushambadzira wakarova. Inotarisirwa, hongu, asi iyo 19.1% inodonha muH1 220 inokanganisa zvakanyanya mabhizinesi. COVID-19 yakagadzirisa mamiriro evatengi, sezvo iine zvimwe zvakawanda zvehupenyu hwezuva nezuva. Vanhu vari kufamba zvishoma uye kushandisa zvishoma. Denda iri rinovimba kuti richapera mumwedzi mishoma inotevera, asi mwedzi iyi yakawedzera shanduko dzakakosha dzaive dzichitobuda mukushambadzira kwenyika. Mobile
Ini ndaityaira kuWest Side yeguta, ndakatarisa pamusoro pebhodhi rebhodhi, uye pakanga paine bhodhi rezvishandiso. Panzvimbo peye bhiribhodhi kuve yakajairwa kushambadzira, kushambadzira kwakaenda nzira yese kusvika pasi. Ruoko rwakasimudza posvo uye chishandiso chaicho chaive munzvimbo yemabhiribhodi. Zvaitaridza sekunge ruoko ruri kuuya kubva pasi chaipo. Dai ndanga ndichida sando, ndingadai
Nharembozha Kushambadzira kuri kubuda uye kuve kwakajairika mazuva ese. Vhiki rapfuura ndanga ndichishanyira mhuri munzvimbo yeMyrtle Beach ndikaona iri bhiribhodi. Zvaive zvakanaka kuona kukwezva kukuru kuchisanganisa nhare mune yavo yekutengesa nzira. Doug ane kubatana kwakafanana kwenhare pane yake saiti, unogona kutumira mameseji MartechLOG ku71813 uye uwane yambiro paanotumira! Ndakacheka shortcode kunze kwemufananidzo uyu kuti pasave nemunhu anoedzwa